प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन एकातिर , परिस्थिति अर्को तिर ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारप्रधानमन्त्रीको सम्बोधन एकातिर , परिस्थिति अर्को तिर !
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन एकातिर , परिस्थिति अर्को तिर !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ढाडस दिएका थिए–उपचार नपाएर कोही पनि मर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन्नँ। तर सम्बोधनको एक दिनपछि मंगलबार धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–४ का ४५ वर्षीय लोकबहादुर परियारको उपचार नपाएरै मृ’त्यु भयो।
चार दिनदेखि रू’घाखोकी, जिउ दु’ख्ने र ज्व’रोबाट पी’डित उनले गाउँकै औ’षधि पसलबाट औ’षधि किनेर से’वन गरेका थिए। स’मस्या झन् ब’ल्झिँदै गएपछि उनी सोमबार साँझ करिब ७ बजेतिर बटेश्वर बजारस्थित आरपी मेडिकल हल पुगे। एकजना सहयोगीसहित मेडिकल पुगेका परियारलाई मेडिकल सञ्चालकसमेत रहेका स्वास्थ्यकर्मी सुबोध साहले जनकपुर जान सल्लाह दिए।
‘ज्व’रो र श्वा’सप्रश्वासमा स’मस्या देखिएपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम जान भनें,’ साहले भने, ‘मैले उपचार गर्ने अवस्था थिएन, मेडिकलमा हामीले प्राथमिक उपचार गर्ने मात्र हो।’ बि’रामीलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम पुर्‍याएका ए’म्बुलेन्सचालक रामबाबु महतोले भने, ‘अस्पतालले बे’ड अ’भाव भन्दै भर्ना गर्न मानेन। त्यसपछि उनलाई जानकी हेल्थ केयर अस्पताल पुर्‍याएँ।
त्यहाँ पनि भर्ना भएन। बि’रामीका सहयोगीले त्यहाँबाट फर्केर अर्को अस्पताल पुर्‍याइदिन भनेपछि रामजानकी हस्पिटल लगिदिएँ।’ त्यहाँ पनि भर्ना नलिइएपछि सहयोगीसहित बि’रामीले घरै पुर्‍याइदिन भनेको चालक महतोले बताए। भर्नाका लागि दुवै निजी अस्पतालले परियारसँग धेरै रकम ध’रौटी राख्न भनेका थिए।
जुन उनका लागि सम्भव थिएन। करिब डेढ घण्टासम्म प्रदेश मुकाम जनकपुरधामका विभिन्न अस्पताल च’हार्दा पनि उपचार सम्भव नभएपछि घर फर्केको भोलिपल्ट मंगलबार बिहान उनले प्रा’ण त्या’गे। एम्बुलेन्स चालक महतोका अनुसार सोमबार राति परियारको अक्सिजन स्या’चुरेसन ४५ र तापक्रम ९९ रेकर्ड गरिएको थियो।
मेडिकल हलबाट एम्बुलेन्समा बसेका परियारले श्वा’स फे’र्न गाह्रो भयो भन्दै अक्सिजन लगाइदिन भनेको चालक महतोले बताए। ‘फू’ल फ्लो’ अक्सिजन दिएर परियारलाई प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याएको चालक महतोले बताए। ‘प्रादेशिक अस्पतालमा धेरैबेर हा’रगु’हार गर्दा पनि भर्ना लिइएन।
अन्य निजी अस्पतालले पनि भर्ना नलिएपछि बि’रामीलाई पुनः फर्काएर बटेश्वरको मेडिकल हलमा ल्याइदिएँ’, चालक महतोले भने। उनका अनुसार रामजानकी अस्पतालमा चिकित्सकले परियारको शरीरमा अक्सिजन मात्रा जाँच गर्दा ४५ मात्र रहेको बताएका थिए।
सास फे’र्न नसकेर छ’टपटाउँदै रात का’टेका परियार मंगलबार बिहानै एकजना सहयोगी साथ फेरि आ’रपी मेडिकलमा पुगे। मेडिकलका स्वास्थ्यकर्मी साह उनलाई हे’र्नेबित्तिकै आ’तिए। उनले तुरुन्तै जनकपुर लगिहाल्न सल्लाह दिए। पैदलै मेडिकल पुगेका परियार पुगेका फर्किन लाग्दा सिँढीमा ढ’ले। ढ’लेका उनी उठ्न सकेनन्। त्यहीं उनले प्राण त्या’गे।
स्वास्थ्यकर्मी साहले बि’रामी मेडिकलसम्म आइनपुग्दै सिँढीमै ढ’लेको जानकारी दिए। ‘उनी कहिलेदेखि बि’रामी थिए, गाउँको कुनकुन मेडिकलमा उपचार गराए भन्ने पनि थाहा भएन,’ साहले भने, ‘हिजो साँझ मकहाँ आउँदा उनको अवस्था एकदमै नाजुक देखेर मैले एम्बुलेन्स मगाएर जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल लगिदिन भनेको थिएँ। आवश्यक उपचार पाएको भए उनको ज्यान जोगिन्थ्यो कि।’
प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेडेन्ट डा. जामुन सिंहले भने, ‘अस्पातलमा बेड भए पो बि’रामी भर्ना लिनु, बेड खाली नभएपछि कसरी भर्ना लिने ? हाम्रो अस्पतालको आइसोलेसन भरिएको छ। बि’रामी फर्काउनुको विकल्प छैन।’ डा.सिंहका अनुसार प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले २६ बेडको आइसोलेसन छ।
जसमा ३२ जना बि’रामी छन। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताए पनि परियारको उपचार नपाएर मृ’त्यु भयो। कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट ब’ञ्चित हुनु नपरोस् र महामारीका कारण कसैले जीवन गु’माउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार सं’वेदनशील रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। तर व्य’वहारमा उल्टो भयो।
नेपाली सेनासहितका सुरक्षाकर्मीले परियारको श’व व्यवस्थापन गरिदियो। तर उनको मृ’त्युको कारण खुलाउने प्र’यत्न कतैबाट पनि भएन। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दुप्रसाद बाँस्तोलाले परियारले उपचार नपाएको जानकारी नआएको बताए। गाउँमै उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएको खबर आएपछि नेपाली सेना परिचालन शव व्यवस्थापनि गरिएको बाँस्तोलाले बताए।
उनले भने, ‘बटेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सोमबार राति नै परियारको मृ’त्यु भएकाले शव व्यवस्थापन गराइदिन भन्नुभयो। मैले नेपाली सेनाको श’व व्यवस्थापन टिमलाई व्यवस्थापन गर्न भने।’ उनका अनुसार श्वा’सप्रस्वासको स’मस्या भए पनि मृ’तकमा कोरोना संक्रमण भए/नभएको केही खुलेको छैन। मृ’त्युपछि स्वाब परीक्षण गर्ने सरकारी नीति नभएकाले नगरिएको उनले बताए।